김치 လုပ်စားကြမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » 김치 လုပ်စားကြမယ်
Posted by etone on Aug 11, 2011 in Food, Drink & Recipes | 16 comments
မုန်ညှင်းထုတ်ကို ရေဆေးပြီး ဆားနယ် ၊နှပ်ပြီး ခဏထားပုံပါ
မုန်လာဥတွေကို အခွံနွှာ ... ရေဆေးပြီး ... အတုံးသေးလေးတွေ စင်းဖို့ ... အဆင်သင့်ပြင်ထားတာပါ
မုန်လာဥနီလေးကို အခွံနွှာ ရေဆေးပြီး ... ပါးပါးအနေတော်လှီးထားတဲ့ပုံပါ ။
ဒါကတော့ ... ကြက်သွန်ဖြူကို အခွံနွှာပြီး ရေစင်အောင်ဆေးထားတာပါ ... ပြီးလျှင် အနေတော် ခပ်ပါးပါးလှီးပါမယ် ..
ကြက်သွန်မြိတ်ကို ရေဆေးထားတာပါ ... ပြီးလျှင် လက်တစ်ဆစ်အရွယ်လေးတွေ တုံးပါမယ် ။
ဒါကတော့ ဂျုံမှုန့်ကို မပျစ်မကျဲလေး ကြိုထားပြီး အအေးခံထားတာပါ ။
ကြက်သွန်နီကို အခွံနွှာပြီး ရေစင်အောင်ဆေးထားတာပါ ...ပြီးလျှင် slide လေးတွေ ဖြစ်အောင် လှီးပါမယ်
ဒါကတော့ ဂျင်းကို ကြေညက်နေအောင် ထောင်းထားတာပါ ။
ဒါကတော့ ... ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် ပါ ... ဒီမှာလည်း ရှိပေမဲ့ ကိုရီးယားက အင်ပို့ လုပ်လာတာပါ
ဒါကတော့... နောက်ဆုံးမြင်ရမဲ့ 김치 ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂျုံနှစ်များများ ထည့်နယ်ထားလို့ မုံညင်းထုတ်လေးတွေကိုတောင် အုပ်နေပါတယ် ။
ဒါကတော့ အနှစ်နည်းနည်းလေးပဲ ထည့်နယ်တဲ့ ပုံပါ ။
မနက်က မဝေရဲ့ ရေညှိ김 밥 အကြောင်းလေး ဖတ်ပြီး ရုံးက ကိုရီးယားမ သူ့အမျိုးတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ … 김치 လုပ်နေတာတွေ့လို့ … ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး … မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ် … ။ ရွာထဲမှာ ဖောက်သည်ပြန်ချဖို့ .. ကော်နက်ရှင်က ဗလောင်းဗလဲ လုပ်နေတာနဲ့ … နှစ်ရာရီလောက် အချိန်ယူပြီး ပုံတွေ စောင့်တင်လိုက်ရတယ် .. ။
ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ … မုန်ညင်းထုတ် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ကြက်သွန်နီ၊ မုန်လာဥ အဖြူ ၊ မုန်လာဥ အနီ ၊ ဂျင်း ၊ ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှူန့် နဲ့ … ကိုရီးယားဆား 소금 တို့ပါပဲ … ။
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ … မုန်ညှင်းထုတ်ကို ရေစင်အောင် ဆေးပါမယ် .. ပြီးလျှင် … နည်းနှစ်မျိုးနဲ့ တုံးပါမယ် … ပထမနည်းကတော့ … လက်နှစ်ဆစ်အရွယ်လေးတွေဖြစ်အောင် တုံးပြီး သက်သက်ဖယ်ထားပါ… ဒုတိယနည်းကတော့.. မုန်ညှင်းထုတ်ကို ဒီအတိုင်း အလက်က ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး အရှည်လိုက်အဖတ်လေးတွေဖြစ်အောင် နွှင်ထားရပါတယ် … ။ ပြီးတဲ့အခါ … တုံးထားတဲ့ အပိုင်းတွေကို ခွဲပြီး ဆားနဲ့.. နယ်ထားရပါမယ် .. ခဏကြာတော့.. ရေတထပ်ပြန်ဆေးရပါမယ်…ထိုအချိန်မှာ မုန်ညှင်းထုတ်တွေ .. နွမ်းနေတာ မြင်ရပါလိမ့်မယ် .. ။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့.. မုန်လာဥဖြူ ၊ မုန်လာဥနီကို အခွံနွှာပြီး .. ခပ်ပါးပါး လက်တဆစ်အရွယ်လေးတွေ တုံးရပါမယ် … ဥနီကိုတော့ပိုလို့ ပါးအောင် တုံးပေးရမယ် … ။ နောက်ထပ် ကြက်သွန်မြိတ်ကိုလည်း သန့်စင်အောင်ဆေးပြီး .. လက်တစ်ဆစ်အနေထား တုံးထားရပါမယ် … ။
တတိယ်အဆင့်ကတော့ ..ကြက်သွန် အဖြူနဲ့ အနီကို ခွှာထားရပါမယ် .. ဂျင်းကိုလည်း ခွာပြီး ရေစင်အောင်ဆေးထားရပါမယ် … ။ ပြီးလျှင် .. ဂျုံမှုန့် ကို ရေနည်းနည်းရောပြီး ခပ်ပျစ်ပျစ်လေး ဖြစ်အောင် မီးပေါ်ပေါ်တင်ထားရပါမယ် … ။ လိုချင်တဲ့အနေထားလေး ရောက်တဲ့အခါ .. မီးဖိုပေါ်ကပြန်ချပါ … ။ ပြီးတာနဲ့…အအေးခံထားပါ…။ အဲ့ဒီအချိန် ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဆတူရောပြီး ကြေညက်နေအောင် ထားရမှာပါ .. ။ ကြက်သွန်နီကတော့ သာမန်လှီးသလိုပဲ လှီးရပါမယ်… ဒါပေမဲ့ .. အရမ်းပါးလှပ်နေအောင်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့… ။
စတုထ္ထအဆင့်ကတော့… ဇလုံကျယ်ကျယ်တစ်ခုကိုယူပြီး … မုန်ညှင်းထုတ်(လှီးပြီးသား နှစ်မျိုးမှ တမျိုး)စီကို ယူပြီး … ဂျုံကြိုထားတာရယ် .. ကြက်သွန်နီ လှီးထားတာရယ် ၊ မုန်လာဥဖြူ၊နီ လှီးထားတာရယ်နဲ့.. ရောနယ်ပါတယ် … ထို့နောက်.. ထောင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ဂျင်းတို့နဲ့ ရောပါ … ဟင်းချက် အရောင်တင် ငရုတ်သီးမှုန့်လည်း ရောနယ်ပါ … ဆား၊ သကြားလိုသလောက် သမအောင် နယ်ပြီးလျှင် … ဗူးအလွှတ်ထဲ လေလုံအောင်ပိတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထား … တရက်ကြာလျှင် စားလို့ ရပါပြီ .. ကြာကြာထားလေ ပိုချဉ်လေဖြစ်တယ်လို့ .. သိရပါတယ်.. ။
ဂျုံနှစ်များများနဲ့စားချင်လျှင်တော့… မုန်ညှင်းထုတ်ကို အသေးလေးတွေ တုံးရမှာပါ … ပြီးတော့ အနှစ်များများ ထည့်နယ်ရပါမယ်.. ။
ဂျုံနှစ်နည်းနည်းနဲ့ပဲစားချင်လျှင်တော့ … မုန်ညှင်းကို အရှည်လိုက်ထက်ခြမ်းခွဲလှီးတဲ့နည်းက ပိုကောင်းပါတယ်လို့ … ရှင်းပြပါတယ် .. ။
ကိုယ်တွေအတွက် ဘာမှ မဟုတ်ပေမဲ့..သူတို့တွေကတော့ တနေ့မစားရလျှင် သေမလို ခံစားရပါသတဲ့လေ … ။ အရင်ကဆို ကိုရီးယားကနေ လုပ်ပြီးသား ခိုးခိုးသွင်းပေမဲ့… ပစ္စည်းထုတ်တဲ့အခါ ရက်ကြာတာမျိုး ၊ ကာစတန်ဖြတ်ရတာ အဆင်မပြေတာ မျိုးတွေကြောင့်.. အခုတော့.. ဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေပဲ အင်ပို့လုပ်ပြီး … အသီးရွက်တွေ ဒီကပဲ ၀ယ်လုပ်စားဖြစ်တော့တယ်တဲ့လေ … ။
etone များ စိတ်ရှည် လက်ရှည် ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာလား ဆိုပြီး
ကွန်မကောင်းတဲ့ကြားက အားပါးတရ ဖွင့်လိုက်တာ ရုံးက ကိုရီးယားမ
လုပ်တာပါလား ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းလမ်းလေး သိအောင် တင်ပေးတာ
လုပ်စားရမှာ ပျင်းတယ် နွယ်ပင်ရဲ့… အလုပ်ကလည်း ပင်ပမ်းသေး … ချက်ဖို့ ပြုတ်ဖို့လည်း ပူရသေးဆို အာရုံနောက်လွန်းလို့ .. စားဖို့ သောက်ဖို့ ကိစ္စတွေကို သိပ်ပြီး တခန်းတနားလုပ်မစားဖြစ်ဘူး … အဲ့ဒီအချိန် အိပ်ပြီး အနားယူတယ် … သူများ လုပ်ကျွေးလျှင် စားတယ် … မလုပ်ကျွေးလျှင် ၀ယ်စားတယ် … ။ အဲ့ဒီကင်မ်ချီစားချင်ရင်တော့ … တောင်းစားလိုက်တယ် ဟဲ ဟဲ
မနေ့ကတောင် စီးတီးမတ်သွားဖြစ်လို့ ကင်ချီလုပ်ပြီးသားတစ်ထုပ်ဝယ်လာသေးတယ်
(အသီးအရွက်ပဲဖြစ်ပေမယ့်)ဈေးကြီးတယ်၊ အဲဒါကြောင့် တစ်ထုပ်ပဲဝယ်လာတာ
ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးနေတာ မetoneပြောပြလိုက်တော့ အိုကေသွားတယ်
ကိုရီးယားကင်ချီနဲ့ ဂျပန်ကဟာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲမသိဘူး
ကျွန်မအဒေါ်ကတော့ ကိုရီးယားမှ ကိုရီးယားပဲ
ဇာတ်ကားတွေကြည့်ြ့ပီး ဇာတ်ကားကောင်းတိုင်း ကင်ချီလည်းပိုကောင်းမယ်ထင်နေပုံရတယ်
ခေါင်းစဉ်က 김밥 တဲ့ ပြုလုပ်ပုံ ကတော့ 감치 ဘယ်လိုလဲ မသိဘူး ကိုရီးယားဆား 소금 နဲ့ မြန်မာပြည်က ဆား ဘာကွာလဲလို့ မေးပေးပါ ..:( ဂျုံမှုန့်က ဘာလို့ ထည့်တာလဲ သိချင်ပါတယ်…
သူတို့ဆားက မှုန့် ညက်နေပြီး အရမ်းလည်း ခြောက်သွေ့ တယ် … ဒါပေမဲ့ အရသာကျတော့ .. ဒီကဆားလို ငန်တူးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး … အချိုလေးလည်း နည်းနည်းပါတယ် … ။
ဂျုံမှုန့်ကို ကျိုပြီးထည့်တာ အချဉ်ပေါက်အောင်ပါ။
etone ရေtitle ကိုနည်းနည်း ပြန်စစ်ကြည့်ပါလား / နောက်စာလုံးက ဖ (သို့) ဘ သံထွက်နေတော့ ကင်ဖတ်ဖြစ်နေတယ်
ဟုတ်တယ် မရွှေနီရေ … မနေ့က ပို့စ်တင်တုန်းက ပြန်မကြည့်မိပဲ … တင်လိုက်ရော ပြီးတော့ သိသိချင်း အက်ဒစ်လုပ်တာ မရတော့ဘူး … ဒေတာ ဘေ့စ် အယ်ယာပြနေတယ် ဒါနဲ့ ရုံးဆင်းသွားတာနဲ့ အက်ဒစ်မလုပ်ရတော့ဘူး … ။ အဲ့ဒီတုန်းက ကင်မ်ချီ김치 နဲ့ကင်မ်ဘဖ်김밥 ရေးရမှာ ….ဂါချီနဲ့ ..감치 ဂါဘဖ် 감밥 ဖြစ်နေတယ် … ။
အားကိုးတကြီးနဲ့ … ဟိုလူကြီး ကိုပြင်ခိုင်းတာ … အပျော်ကြံတယ်လေ ပြင်လိုက်တော့မှ ကင်ဖ်ဘဖ်က ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သွာတယ် … ။ ဒီမနက်ပြန်ကြည့်တော့ ပြူးတူ ပြဲတဲကြီးတွေ့မှ … အခုလေးတင် ပြင်လိုက်ပြီ … ဟဲ ဟဲ
ကျွန်မအဒေါ်က ငြုတ်သီးအပွကို ထောင်းထည့်မယ်လုပ်နေလို့
ဆားကတော့ ဒီကဆားကိုသုံးမယ်၊ ပြီးမှ သကြားနည်းနည်းထည့်လိုက်တော့မယ်
စီးတီးမက်တွေမှာရှိတယ် ပန်ပန်ရဲ့ …. ။ အထုတ်အရွယ်စားစုံ ၀ယ်လို့ရတယ် … ။ မ၀ယ်ချင်လည်း အိမ်မှာသုံးတဲ့ အရောင်တင်မှူန့် သုံးလို့ ရတာပဲ … ။ ကိုယ်တွေသုံးနေတာက အရောင်းရဲလည်းရဲ စပ်လည်း စပ်ပေမဲ့..သူတို့ဟာက အရောင်ပဲလှပြီး အရမ်းကြီးမစပ်ဘူး ။
လောလောဆယ်တော့ ဒီကအရောင်တင်နဲ့ပဲ လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်
အဖေကတော့ပြောနေတယ် နင်တို့ပြောတဲ့ကင်ချီက ရှမ်းချဉ်လို့ပါပဲတဲ့
ကိ်ုရီးယား ကင်ချီ နဲ့ အရမ်းပြောနေကြလို့ ဘယ်လိုလဲလို့ မဆွိတို့ဆီက မုန်ညှင်းချဉ်ပါပဲနော်
သူတို့နည်းက တမျိုးပေါ့ ။ ကင်ချီလုပ်တာသိချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ ခုမှပဲနည်းသိတော့တယ်။
ခုလိုတင်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် etone ရေ ။
မဆွိရေ.. ဒီက မုန်ညှင်းချဉ်က ချဉ်ဖတ်တမျိုးပဲ သုံးလို့ရတယ်လေ … သူတို့ ကင်မ်ချီက အစိမ်းစား၊ ကြော်လှော် ၊ သုတ် နဲ့ … ဟင်းရည်ပါ လုပ်လို့ရသတဲ့ … ။
Oh!.. Korean disease, Korean disease!!
ဂျုံမှုန့်မပါပဲနဲ့ လုပ်စားဖူးတယ် …. ၃ ရက်လောက်ထားလိုက်တော့ ကင်ချီဖြစ်သွားတယ် ..
ဒါပေမယ့် အနံ့ပြင်းလို့ အခုနောက်ပိုင်း မလုပ်စားဖြစ်တာတောင်ကြာပြီ …
ဂျုံမှုန့်ထည့်ပြီး တစ်ခါလောက် စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်အုန်းမယ် ….
အီးတုံးရေ ဒီမှာ မုန်ညှင်းထုတ်တွေ ၂ထုပ် ၅ကျပ် လျှော့တာနဲ့ ၁၀ဖိုးဝယ်ပြီး လုပ်ထားတာပေါ့။ ပြီးတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့် ခေါက်ဆွဲပြုတ်ထဲ ထည့်စား ယောက်ကျားက ပြောနေတယ် မင်းကတော့ ကိုရီးယားကားတွေ ကြည့်ပြီး ရူးနေပြန်ပြီတဲ့။ ဒါပေမဲ့ မုန်လာဥ အဖြူထည့်တာတော့ မသိဘူး။ နောက်တခါမှ ထည့်ကြည့်ဦးမယ်။